यो Sacraments – 2माछा
घर / चर्च / यो Sacraments
नाम implies रूपमा, को Sacraments मण्डली मा येशूले स्थापना पवित्र रीतिथितिहरू छन्. ठीक कुरा, क्याथोलिक विश्वासमा सात Sacraments छन्: बप्तिस्मा, पुष्टि, यो Eucharist, स्वीकार, Matrimony, आदेश, र बिरामी को Anointing.
मार्फत Sacraments विश्वासीहरूलाई पानी जस्तै भौतिक कुराहरू मार्फत परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त, रोटी, रक्सी र तेल.
को Sacraments तिनीहरूले इङ्गित अनुग्रह व्यक्त कि बाहिरी संकेत रूपमा बुझन सकिन्छ. जल, उदाहरणका लागि, सफाई र जीवन अभिव्यंजक. परमेश्वरको अनुग्रहको द्वारा, बप्तिस्मा को पानी वास्तवमा पापको प्राण सफा र ईश्वरीय जीवन संग यो भर्न (देख्न यूहन्नाको सुसमाचार, 3:5, र प्रेषितहरूको प्रेरित, 2:38). यो Sacraments को Incarnation पछि पैटर्न छन्, जो परमेश्वरको मा, एक आध्यात्मिक जा, मानव शरीर मा लिए–र अदृश्य एक देखिने भए.
भौतिक कुराहरू माध्यम सरुवा भइरहेको अनुग्रहको विचार एक बाइबलीय अवधारणा छ.
एक्लै नयाँ नियममा, हामी यसरी प्रयोग पानी देख्न (फेरि, देख्न यूहन्ना 3:5; 9:7; प्रेषितहरूको प्रेरित, 8:37; पावलको तीतसलाई पत्र 3:5; वा पत्रुसको पहिलो पत्र 3:20 – 21); साथै तेल रूपमा (देख्नुभएको मार्क को सुसमाचार 6:13, वा जेम्स को पत्र 5:14); माटो (देख्न यूहन्ना 9:6); लुगा (मार्क 5:25 वा लूका 8:43); र पनि रूमाल (देख्नुभएको प्रेषितहरूको प्रेरित 19:11-12).
परमेश्वरको अनुग्रह अन्य समझदार कुराहरू माध्यम प्रसारित छ, पनि, यस्तो मरियमको आवाज र पत्रुसको छाया रूपमा (देख्नुभएको लूका को सुसमाचार 1:41, 44, र प्रेषितहरूको प्रेरित 5:15, क्रमशः).